Windsurf na Kitesurf na Tarifa, isi obodo ikuku! - THE INDIAN FACE
Otu n'ime ebe kachasị mma maka ịme ihe windsurf na kitesurf enweghi mgbagha Tarifa, n'ógbè Cádiz Ọ bụghị n'efu ka ha maara ya dị ka isi obodo ikuku! Obodo a nke Andalus, nke jupụtara na njem nlegharị anya na ebe nkiri, jupụtara na egwuregwu, ọdịbendị na ntụrụndụ nke ga-eme ka onye ọ bụla na-eme njem na-anụ ọkụ n'obi ibi ndụ kachasị mma na oge egwuregwu na-ahụ n'anya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha na-achọ ebe kacha mma ha ga-eme. windsurf y kitesurf na mara mma paradisiacal osimiri na ihe ùgwù ifufe!
N'eziokwu, Tarifa Ọ bụ obodo ndịda kachasị na kọntinent Europe, nke dị n'etiti Oké Osimiri Mediterenian na Oké Osimiri Atlantic na Strait nke Gibraltar, nke a na-akpọkwaLaMIkuku ifufe”Isi ihe dị mkpa maka omume nke ọzụzụ egwuregwu a! Dị njikere ikwe ka ndị kachasị mma nke Andalusia buru gị? Ọ bụrụ na ị hụrụ oke osimiri n'anya, ikuku na njem, wee gụọ ma chọpụta ahụmịhe nke nleta Tarifa, ebe kachasị mma iji na-eme ihe egbe na ikuku ikuku!
Ọ bụrụ n’inwe mmasị n’egwuregwu egwuregwu, tinyere kitesurf na windsurf, ya mere Tarifa O nwere ike ịbụ otu n'ime ebe kacha mma na Spain ị nwere ike ịga leta ya. Ma nke ahụ bụ ifufe dị n'ime Tarifa Ọ na-adọrọ mmasị karịsịa n'ihi na ọ na-agwakọta ikuku kachasị mma site na ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, nke a bụ kpọmkwem ihe na-enye ya ohere nke ịbụ otu n'ime ebe ndị a tụrụ aro ka ị gaa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nke ọ bụla n'ime ndị a. egwuregwu ikuku.
Kedu ka ifufe dị Tarifa?
En Tarifa ọnwa nke kachasị ikuku bụ July, a ga-ekewa ya na abụọ, nke kachasị dịkarị: Poniente, nke na-esite site n’ọdịda anyanwụ, na Levante, nke si ọwụwa anyanwụ abịa. Poniente bụ ikuku ọhụrụ nke na-adaba n'ike n'etiti 2 na 5 Beaufort nke na-eweta ya na obere ebili mmiri, ọ bụkwa ihe kachasị atụ aro maka ịme kitesurf, tumadi n’oge udu mmiri, nke bụ oge ọ kacha adịkarị. N'akụkụ ya, Levante bụ ifufe siri ike karị, dị ọkụ ma sie ike karị nke na-aga n'etiti 5 na 6 Beaufort, nke kachasị adabara maka ịme ihe. windsurf, ọkachasị n’agbata ọnwa Mee na Ọktọba. Kpọmkwem na Cádiz, Levante bụ nke na-akụkarị ihe, na nkezi nke ụbọchị 165 kwa afọ.
Onwere ihe diri onye obula! Eziokwu bụ na ha bụ ikuku ebumpụta ụwa anyị nwere ike iji mee ihe ọkachasị ịme egwuregwu abụọ n'ọnọdụ kacha mma. N'ihi nke a, Tarifa aburula ebe nleta anya na nso nso a, na-eme ka ndi huru ya n'anya windsurf na kitesurf si na Spain niile na ụwa niile, ma na-emepe ebe nkiri njem ya gburugburu egwuregwu abụọ ahụ.
AKWUKWU VIT WINDSURF
Tarifa A maara ya karịsịa maka ifufe ya na egwuregwu egwuregwu ndị chọrọ ya maka omume ya, yabụ ị ga-ahụ obodo ahụ nke kandụl na ị ga-aza ajụjụ na-efegharị n'ụsọ osimiri ya mara mma. Ma ajụjụ a anaghị akwụsị ibili ... Kitesurfing ma ọ bụ ikuku ikuku?
Kacha nkịtị a afọ ole na ole gara aga bụ ịhụ ndị mmadụ na-sọọfụ, windsurf na ụgbọ mmiri, yana egwuregwu egwuregwu ndị ọzọ, mana ọbụghị egbe ndị dị ugbu a dị ka ọ kachasị karịa n'anya mgbe anyị gara n'obodo a. Ihe niile gbanwere gburugburu afọ 2000 na popularization nke kitesurf, nke wetara ọgbọ ọhụrụ nke kiteboardersJikere maka nsogbu ma nwee mmasị ịnụ ụtọ ikuku kacha mma maka egwuregwu.
N'ụzọ bụ isi, ndị kitesurf (kiteboarding ma ọ bụ flysurfing) bụ ihe egwu na egwu egwuregwu ọzụzụ na-agwakọta windsurf, wakeboarding na paragliding, nke mmegharị ya bụ ihe eji eme ihe na-adọta onye na-eme egwuregwu na bọọdụ. Ọ kitesurf dị iche karịsịa si windsurf n'ihi na omume ya anaghị achọ ọtụtụ akụrụngwa pụrụ iche, ma ọ bụ ifufe siri ike, kama ọ na-emekọ sọọfụfụ na ikuku dị mma ma kwụsie ike. Nke a nwere ike inye onye na-agba ọsọ nnwere onwe ọzọ, mana ohere ka ukwuu maka enweghị njikwa.
Ọ maara na maka omume nke kitesurf Nkwadebe nke anụ ahụ adịghị mkpa, mana ọtụtụ ọchịchọ, usoro na ike ijikwa okpokoro nke ọma. Nke a bụ otu isi ihe dị iche na windsurf, nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri anọ nke ịdị adị, na nke ị ga-achọ ịnweta ọdịdị ahụ na ọgụgụ isi kachasị nta, na ọtụtụ ihe ọmụma teknụzụ. Ọ bụ egwuregwu nke njem na ihe egwu nke chọkwara nnukwu ndidi mgbe ị na-amụ ma na-akụzi ihe, n'ihi na bọọdụ na-ebugharị na-ebugharị na-ahụ maka ikuku mmiri, onye na-agbago ebili mmiri na ya ma na-eji ifufe ahụ emegharị ahụ.
N'agbanyeghị myirịta dị n'etiti ha, egwuregwu abụọ ahụ nwere usoro na mmetụta nke aka ha. N'ezie, nke kachasị bụ na ndị hụrụ ya n'anya windsurf ahula amara ka kitesurf na nke ọzọ, mana enwereghị obi abụọ na egwuregwu abụọ a mara etu esi emekọrịta ọnụ Tarifa, a maara dị ka mecca maka ha abụọ kitesurf dika nke windsurf N'otu aka ahụ, ebe e jiri oke osimiri abụọ ya gọzie ha, dịka ndị Tarifu na-ekwu:Nwa-nnụnnụ nke mụrụ Levant na nne mụrụ West".
OMUME WINDSURF NA KITESURF NA UGO
¡Ileta Tarifa n'oge ọkọchị ma ọ bụ oge ọ bụla n'afọ ọ ga-abụ ihe ịtụnanya maka ịme ihe windsurf y kitesurf! Buru n'uche na obodo a na-ebi site na kitesurfing na windurfing, ọ gaghị abụ ihe ijuanya ịhụ ka ihe niile - ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile - n'ime ya gbadoro anya n'egwuregwu abụọ a (ọkachasị kitesurfing, nke na-ewu ewu) site na ebe obibi na ụlọ ahịa, ọbụna ọmarịcha ụlọ mmanya na ebe a na-ere nri, wereghara ụlọ akwụkwọ. Ma nke ahụ bụ ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-eleta Tarifa, karịsịa n’agbata ọnwa Mee na Septemba, metụtara windsurf na kitesurf n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ.
Y’oburu n’inwe oka ike n’egwu n’egwuregwu obula ma obu ka igha abuo Tarifa ebe kachasị mma maka omume egwuregwu gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido na ị ga-anwa anwa itinye aka na egwuregwu gị, ị nwere ike ịchọta ụlọ akwụkwọ nkwonkwo ndị ọkachamara na-enye ọzụzụ na windsurf y kitesurf en Tarifa maka ọkwa niile, nkeonwe ma ọ bụ nke otu, maka ụmụaka, ndị ntorobịa na ndị okenye.
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ịmụ na ịkwa nka ọ bụkwa ebe dị mma ịme ya n’ihi na mgbakwunye na nkuzi na ndụmọdụ, ị ga-ahụ nhọrọ nke klasị ụbọchị, lebara anya dịka afọ gị na ahụmịhe gị si dị. N'ọnọdụ ọ bụla, ha ga-enye gị akụrụngwa niile dị mkpa iji bido, dabere na agụmakwụkwọ nke ị debanyere aha na otu n'ime ụsọ mmiri dị n'obodo ahụ.
Dị ka anyị kọwara na mbụ, omume egwuregwu abụọ abụrụla isi mgbanwe maka Tarifa na usoro nke njem, nke mere na o burula isi mma na otutu na magburu onwe nhọrọ malite n'ime njem nke windsurf na kitesurf ha abuo! Na-echeta mgbe niile na windsurf chọrọ ihe karịa kitesurf, yabụ na ị ga-achọkwu oge maka mmụta na njikwa, yana ngwa na ngwa.
Kacha mma ọnụego osimiri
Tarifa nwere ndọtị dị ukwuu nke osimiri dị mma maka njem ndị njem na nke a njem njem njem. Mana ọ bụrụ na ihe gị na ikuku ifufe, ndị a bụ osimiri 5 kachasị mma maka kitesurfing na windurfing Tarifa nke ị nwere ike ịhọrọ:
Osimiri Los Valdevaqueros
Ọ bụ osimiri dị mma nke ihe dịka 4050m n'ogologo, n'etiti Punta Paloma na Punta de la Peña, nke na-aga n'ihu na njedebe nke n'ọnụ mmiri ahụ ruo dune nke dị n'ebe ahụ. Ọ bụ ihe ama ama na kitesurfers na windurfers n'ihi na akụrụngwa ya, ikuku ya na gburugburu ya dị mma maka usoro ọzụzụ abụọ, nke ụwa niile ghọtara na Europe niile. Ọ bụ ikekwe Osimiri nke Tarifa ebe ị ga - ahụ ụlọ akwụkwọ na ụlọ mmanya maka ihe omume abụọ ahụ.
Osimiri Los Lances
Ọ bụ otu n'ime osimiri ndị ama ama maka ịme ihe kitesurf na windsurf n'ihi na o nwere akụrụngwa niile na nkasi obi maka ya, agbanyeghị na amachibidoro ịme egwuregwu abụọ ahụ n'ọnwa Julaị na Ọgọst. A hụrụ osimiri mmiri oyi a n'akụkụ oke osimiri Tarifa, wee bido na ebe obibi Los Lances Avenue. Ọ bụ ogologo osimiri dị ihe dịka 7250m n'ogologo, kewara abụọ n'akụkụ nke Jara River: Lances Sur (nke dị nso n'obodo ahụ) na Lances Norte (nke dị anya site na obodo ahụ).
Otu n'ime osimiri kachasị mma ma mara mma gburugburu Tarifa! N'ịbụ onye a ma ama maka ugwu 35m dị elu, Punta Paloma Beach dị ihe dị ka 10km site na obodo ahụ ma na-enye ikuku dị egwu ma mara mma, yana oke osimiri kachasị mma maka ịme ihe windsurf na kitesurf. Echiche ndị a dị oke egwu, dịka ọ na - adị site na njedebe ruo na njedebe.
Osimiri Dos Mares
Ihe dị ka 5km site Tarifa anyị hụrụ Dos Mares Beach, otu n'ime nhọrọ ndị kachasị mma ma kachasị ewu ewu iji mee ihe abụọ windsurf dị ka kitesurf, ọ bụ ezie na mpaghara dị nso na Hotel Dos Mares ka edobere naanị maka windurfing. Ọ nwere ezigbo ọdụ ụgbọ ala sara mbara ma saa mbara nke na-eduga n'akụkụ ụsọ osimiri, ọ bụ ya mere o ji dị mma iji ụgbọ ala jiri ngwa egwuregwu niile.
Osimiri ọzọ dị ịtụnanya Tarifa bụ Playa Chica, nke dịdebere agwaetiti Las Palomas. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ya bụ osimiri kachasị ukwuu na obodo a, ọ bụ n'ezie ezigbo ebe dị mma ma dịkwa mma, nke nwere ájá doro anya na mmiri doro anya, ọ bụ ezie na ọ dị oke oyi, ma dị n'akụkụ ndịda nke kọntinent Europe, ịbụ osimiri ikpeazụ nwere mmiri Mediterenian . Ọ bụ ezie na ọ na-ewu ewu nke ukwuu maka mmiri mmiri, n'oge oyi ọ kachasị mma maka ikuku ikuku, ọkachasị.
Egwuregwu, ọchị na izu ike na Tariff
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Kite na Windsurf bụ ihe eji arụ ọrụ nke ọma Tarifa, nke a ka bu obodo juputara na ntụrụndụ, njem nleta, egwuregwu mmiri na ohere maka oge ezumike na izu ike.
Ihe ị ga-eme Tarifa?
Ezigbo visibiliti na mmiri dị na mmiri Tarifa (n'agbata ogo 15 na 20 n'oge ọkọchị na oge oyi n'oge dị anya), yana ndụ mmiri ya sara mbara, na-eme ka ọ bụrụ ebe kachasị mma maka ndakpu mmiri, ọkachasị na Isla de las Palomas Natural Park, ebe ị nwere ike ịhụ ụzarị ọkụ , octopuses, moray eels, sunfish na ọtụtụ ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụ ọrụ ga-adabere na mmiri oke osimiri na ifufe; gị na Poniente ị ga-amaba n’ebe ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti ahụ na Levante ị ga-egwu mmiri n’ebe ọdịda anyanwụ.
En Tarifa Younwekwara ike ịnweta ebe dị egwu maka ịgagharị n'oge oge oyi na ọdịda anyanwụ, ọkachasị na mpaghara Atlantic na Balneario Beach na Chica Beach na mpaghara Mediterenian, kamakwa na Yerbabuena Beach, nke dị na Natural Park nke Breña na Marismas del Barbate, ihe dịka 35km si Tarifa, nke ị nwere ebili mmiri magburu onwe ya maka sọọfụ.
Egwuregwu ọzọ dị mma nke ị nwere ike ịhọrọ na ya Tarifa Ọ bụ Kayak, nke ị nwere ike ịgbazite n'ụsọ osimiri dị na mpaghara, ma ọ bụ Padle Surf ma ọ bụ guzosie ike, nke site n'enyemaka nke ịkwọ mmiri na nnukwu karịa sọfụfụ ọdịnala ị nwere ike ịnyagharịa ma ọ bụ sọfụ ebili mmiri. Na mgbakwunye, n'ihi ọnọdụ ya dị mma na Strait nke Gibraltar, Tarifa Ọ ghọwo ebe kachasị mma maka igodo, ọ pụrụ iche n'ihi na ọ bụ ebe dị mma iji hụ ebe ọhụụ na dolphins. Ihe ngosi nke okike!
Maka ịma mma nke obodo ochie ya, ị gaghị akwa ụta na gị na ndị ọrụ ibe gị na ndị ezinụlọ gị gafere obodo ahụ iji nwee ọ enjoyụ na mmemme ọdịbendị ya, ụlọ nri, mbara ala na kọfị mbụ, pụọ n'abalị, ma ọ bụ nọrọ otu ụbọchị izu ike. n'ọtụtụ spa ma ọ bụ ịzụ ahịa na obodo. Ahụmahụ sitere na ebe ọ bụla ị na-ele anya!
Kedu ka ebe obibi si dị Tarifa?
TarifaDị ka njem nleta na Spain, ọ nwere ọtụtụ nhọrọ ụlọ ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na ị gara obodo a n'oge ezumike ọzọ gị ma ọ bụ na njem gị ọzọ, gụnyere ebe ọdịnala na ụdị ụlọ obibi ọzọ.
Nwere ike ịchọta ụlọ nkwari akụ dabara na mmefu ego niile, ma ọ bụ ọbụna ịgbazite ụlọ na ụlọ ezumike iji chekwaa elu yana ịhọrọ obere ohere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa akụrụngwa egwuregwu gị mgbe ị gara. Tarifa. Agbanyeghị na eziokwu bụ na ọtụtụ ndị kpebiri ka ha maa ụlọikwuu n'otu n'ime ebe izu-ike ahụ Tarifa na gburugburu ya, nke dị ezigbo nso n'ụsọ osimiri na okike, ebe ọ bụ na ọtụtụ obodo ndị dị na mpaghara ahụ, dị ka Bolonia na Zahara de los Atunes, dị njikere maka ya. Enwekwara ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na-agụnye n'etiti ebe ha ga-ehi ụra nhọrọ ka ha "maa ụlọikwuu", mana n'ụlọikwuu zuru ezu, ụfọdụ n'ime ha dị okomoko, na-eme ka ụwa abụọ kachasị mma nwee otu ahụmahụ.
Dị ka ị hụrụ, ileta Tarifa Ọ bụ nnukwu ohere iji nwee ezumike zuru oke, juputara na njem, ọchị, na izuike! Agbanyeghi icheta na odi nkpa iburu n'uche na ebe nzuko a maka uzo na ikuku ikuku na enye gi usoro nke emebere maka nchekwa nke ndi nleta ya nile, nke di iche site na osimiri rue osimiri na site kwa onwa rue n'ọnwa, yabụ anyi aghaghi ima nke oma egbochila ndị njem nleta ma ọ bụ ndị njem ibe gị ọzọ.
Na mgbakwunye, ọ dị oke mkpa iburu n'uche mgbe niile na egwuregwu ikuku na-adabere na ya ka a rụọ ya, nke a na-etinyekwa ihe egwu ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị maara nke ọma, gụrụ akwụkwọ, ma dị njikere ime ihe, Tarifa Obi abụọ adịghị ya na ọ ga-abụ ebe kachasị mma iji banye n’ime ụwa nke windsurf na kitesurf na Spain. Gaa maka ya!
Ọ bụrụ n’ịgabeghị na Hoi An, nke a bụ oge gị ime ya! Otu obodo dị n'ụsọ oké osimiri nke Vietnam ma mara maka ịma mma ya, akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị na ọdịnala ya. Ọ dị n'etiti Ho Ch
Otu n'ime ihe ngosi kachasị mma banyere parachute bụ doro anya Australia. Chọpụta ahụmịhe nke ịrị elu igwe na Sidney - Wollongong!